एक्स–रे गर्दा ध्यान दिनुपर्ने ८ कुरा :: बोलराज आचार्य (राजन) :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
एक्स–रे गर्दा ध्यान दिनुपर्ने ८ कुरा
बोलराज आचार्य (राजन) शनिबार, चैत ८, २०७०, ०९:५१:००
एक्सरे एउटा किरण (रे) हो। जसले रोग पत्ता लगाउन सहयोग गर्ने फाइदाँसगै शरीरमा केही मात्रामा असर पनि गर्छ। यो किरणमा एउटा मेसिनमा हाई–भोल्टेज करेन्ट सप्लाई गरेपछि एक्स–रे मेसिनको ट्यूबमा रहेको क्याथोड तात्छ। क्याथोडबाट नेगेटिभ चार्ज भएका ईलेक्ट्रोनहरु निस्कन्छन। ती इलेक्ट्रोल (फास्ट मुभिङ) त्यहीँ भएको पोजेटिभ चार्ज एनोडतिर गएर ठोक्किन्छन्।
त्यतिखेर एकप्रकारको आँखाले देख्न नसकिने अत्यन्तै शक्तिशाली किरण एक्स–रे मेसिनको ट्यूबबाट बाहिर निस्कन्छन्। यसैको प्रयोग गरेर विभिन्न शरीरका भित्री अंगको फोटो निकाल्ने गरिन्छ। यसरी निकालिएको अत्याधिक शक्तिशाली किरण (एक्स–रे) शरीरको कोषमा गएर ठोक्किन्छ र केही कोषिकालाई मार्ने पनि गर्छ।
त्यही भएर रेडियोग्राफी कोठामा एक्स–रे गर्ने बेलामा बिरामी बाहेक अरूलाई बस्न दिएँदैन किनकि त्यसले अरूलाई पनि असर गर्छ। यस्तो असरलाई चिकित्सा विज्ञानमा रेडियसन हेजार्ड भनिन्छ। जसको कारण सामान्य रोगदेखि लिएर छालाको क्यान्सरसम्म पनि हुनसक्छ। यसले आँखाको नानीलाई असर गर्नसक्छ। नयाँनयाँ कोषिका मारिदिन सक्छ। पुरुष जातिको शुक्रकिट बन्ने प्रक्रियामा हानी पुर्‍याउन सक्छ।
स्त्री प्रजनन् अंगलाई असर गरेर बाँझोपन निम्त्याउन पनि सक्छ। शरीरमा अत्यन्तै आवश्यक पर्ने हर्माेन निकाल्ने थाईराईड ग्रन्थीहरुलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ। गर्भवती महिलालाई एक्स–रे कोठामा प्रवेश निषेध नगरेमा यस्ता बिभिन्न समस्या आउन सक्छन्।
एक्स–रे गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
१.आवश्यक परेको अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मात्रै एक्सरे गर्ने।
२. एक्स–रे रेडियालोजिकल टेक्निसियन वा टेक्नोलोजिष्टहरूबाट मात्र गर्ने÷गराउने।
३. एक्स–रे गर्ने बेलामा बिरामीलाई मात्र एक्स–रे कोठामा रहन दिने।
४. अस्पताल प्रशासनले एक्स–रे कोठालाई सिल गर्ने।
५. बारम्बार एक्स–रे नदोहोर्‍याउने
६. एक्स–रे गर्ने कोठामा बस्नैपर्ने भए लिड एप्रोन लगाउने वा ट्यूबभन्दा टाढा बस्ने कोशिस गर्ने वा रेडियो ग्राफरसँगै कन्ट्रोलरूममा बस्ने।
७. बिरामीको जुन ठाँउको एक्स–रे हो, बाँकी ठाँउमा मिलेसम्म रेडियसन प्रोटेक्सनको सामान प्रयोगमा ल्याउने।
८. गर्भवती महिलालाई एक्स–रे कोठामा, एक्स–रे गर्ने बेलामा बस्न नदिने यदि उसको एक्स–रे गर्ने पनि हो भने अगाडी नै रेडियोग्राफरलाई जानकारी दिएर मात्र गराउने।
आवश्यक परेको अवस्थामा असर गर्नेभन्दा बढी फाइदा हुने हुँदा एक्स–रे गरिन्छ। एक्स–रे गर्दा रेडियो ग्राफरलाई भने खासै कुनै हानी पु¥याउँदैन। किनकि उनीहरुका लागि एक्स–रे मेसिन राखेको ठाउँसँगै कोठा बनाइएको हुन्छ , जसलाई नियन्त्रण कक्ष भनिन्छ। यो कोठाबाट बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्न मिल्नुको साथै रेडियोग्राफरले अन्य केही नियममा रहेका काम गरिरहेका हुन्छन्। आवश्यक सावधानी अपनाएर चलाएमा एक्सरेको असरदेखि डराउँनु पर्दैन।
रेडिएसन सम्बन्धी अन्तराष्ट्र्रिय संस्था आइसिआरपीको मापदण्ड अनुसार एक्स–रे गर्ने र गराउनु पर्नेमा अस्पताल प्रशासनले ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा सर्वसाधारण बिरामीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। किरणको चुहावट रोक्नका लागि समय–समयमा सम्बन्धित निकायले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्छ। र गलत ठहरिएमा कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ।
- लेखक मेडिकल रेडियोग्राफर हुन्
तपाईंको खुट्टा धेरै निदाउँछ? यी रोगका लक्षण पनि हुनसक्छ खुट्टा निदाउनुका विभिन्न कारण हुनसक्छन् तर सबैभन्दा साधारण कारण भनेको एउटै स्थितिमा बसिरहँदा रक्तसञ्चार कम हुनु वा नसामा असाध्यै धेरै दबाब पर्नु हो। यदि कसैको खुट्टा लामो समयसम्म निदाउँछ भने यो एक गम्भीर रोगको पनि संकेत हुनसक्छ। १० घण्टा पहिले
यस्ता छन् दही-चिउराका फाइदा दही-चिउरा खान असार १५ लाई नै कुर्नुपर्छ भन्न छैन। अरुबेला पनि दही-चिउरा खाँदा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यो जुनसुकै उमेर समूहले पनि खान सक्छौं। जुन बेला पनि खान सकिन्छ। बुधबार, असार १५, २०७९
सिकलसेल एनेमियाका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न माग ३० मिनेट पहिले